दाङको विद्यालय कौवाघारीमा सञ्चालनमा आएको योग कक्षा प्रभावकारी बन्दै | Samacharpati दाङको विद्यालय कौवाघारीमा सञ्चालनमा आएको योग कक्षा प्रभावकारी बन्दै – Samacharpati
मङ्लबार, भदौ २९, २०७८
नेलम्बो नेपालद्वारा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण
दाङ : खोलाले कार बगाउँदा चार जनाको ज्यान गयो
न्यायालयलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्छ – मुख्यमन्त्री पोखरेल
कलाकार निशा घिमिरेको मृत्यु
नेलम्बो नेपालद्धारा पोखरा ४ नं. वडा कार्यालयलाई सहयोग
गायिका समिक्षा अधिकारीको आवाजमा “यो भाग्यमा” सार्बजनिक
दाङको विद्यालय कौवाघारीमा सञ्चालनमा आएको योग कक्षा प्रभावकारी बन्दै
तुलसीपुर, २५ मङ्सिर । दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका–२ स्थित आधारभूत विद्यालय कौवाघारीमा सञ्चालनमा आएको योग कक्षा प्रभावकारी भएको छ । उक्त विद्यालयले विसं २०७४ माघदेखि विद्यालयमा योग कक्षा शुरु गरेको योग शिक्षक रोवरबहादुर ढकालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले विद्यालयको सातौँ घण्टीमा उक्त कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । अहिले कक्षा ३ देखि ५ सम्मका २० विद्यार्थीले योग कक्षा लिइरहेका छन् । योग कक्षा सञ्चालनमा आएपछि विद्यार्थीलाई सहज भएको उहाँको भनाइ छ ।
“पहिले योग किताबमा मात्रै पढाइन्थ्यो, अहिले प्रयोगात्मक नै हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले विद्यार्थीलाई चौतर्फी फाइदा भएको छ ।” योग कक्षा शुरु भएपछि विद्यार्थीमा स्वास्थ्य, आहारव्यहार, बोली भाषामा समेत परिवर्तन आएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले पतञ्जली योग समितिको समन्वयमा योग कक्षा सञ्चालनमा आएको भन्दै यसप्रति विद्यार्थी आकर्षित रहेको समेत बताउनुभयो । अहिले २० विद्यार्थी रहेका र अन्य विद्यार्थीले समेत इच्छा जाहेर गरे पनि उचित साधन, स्रोत नहुँदा केही समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।
दाङमा उक्त विद्यालयसहित केही निजी विद्यालयले योग शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । योग कक्षा शुरु भएपछि विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्थामा पनि सुधार हुँदै गएको प्रधानाध्यापक लक्ष्मण देवकोटाले बताउनुभयो । दाङको शैक्षिक सुधार गर्न सबै सामुदायिक विद्यालयले यसरी नै योग कक्षा सुधार गर्नुपर्ने दङ्गीशरण गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विनोद अधिकारीले बताउनुभयो । “योग स्वास्थ्यका लागि मात्रै नभएर चौतर्फी विकासका लागि अपरिहार्य छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दाङका सबै विद्यालयले यसरी नै योग कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।” पछिल्लो समय जिल्लाका गाउँ–गाउँमा योग गर्ने कार्यको विस्तार गरिँदै आइएको छ ।
नमुना विद्यालयको नमुना काम (फोटो फिचर)
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पुन नियुक्ती हुने सम्भावना कति ? हामिले पाएका्े अहिलेसम्मको अपडेट
लुम्बिनीमा नयाँ ट्विस्ट अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकालाई मन्त्री बनाउने तयारी कतै फकाउने बाटो पो हो कि ?
दाङमा सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प
भागरथी हत्या प्रकरण : आरोपितको तेस्रोपटक म्याद थप
आज ओली समूहकाे बुटवलमा सभा, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने
संघीयता बलियो भए मात्र शहीदको सपना पूरा हुन्छ : मुख्यमन्त्री शाही
मेस्सीको फाइनल रेकर्ड : बार्सिलोनामा लोभलाग्दो, अर्जेन्टिनाका लागि अत्यासलाग्दो
10 Business Ideas to Start in Nepal within the Budget Range of 10k
कुमारले अनुपालाई भगाएपनि सुमित्राको माया मरेको छैन ! एक हप्तामा यस्तो गर्दै छिन् कुमारकी श्रीमतीले
रामकृष्ण ढकाल र उनकी पत्नी निलम शाह ढकाल काे रोमान्टिक म्युजिक भिडियो
स्याङ्जा र कास्कीमा सवारी दुर्घटना